Maxaa Qadar calaaqaadka loogu gooyay? W/Q Hussein Salad | RBC Radio
Maxaa Qadar calaaqaadka loogu gooyay? W/Q Hussein Salad
Maxaa Qadar calaaqaadka loogu gooyay?
Subixii isniinta 5tii June 2016 ayaa dawladaha ; Sucuudi Carabiya, Isutaga Imaaraadka Carabta, Baxrayn iyo Masar Xiriirkii dawladnimo oo dhan walba ah ay u jareen dawlada Qadar. Isla maalintaa waxaa raacay afartaa dawladood Jasiiaradaha Maldives, Mauritius , Yemen, dhinaca uu hogaamiyo Cabdirabu Haadi Mansuur, iyo weliba Askariga Libiya ee Xaftar.
Dhacdadani waxay amakaag ku riday inta badan caalamka gaar ahaan kuwa carabta iyo Islaamka. Laba sababood dartood; waa tan horee wax colaada oo ka horeeyay arintan ma jirin marka laga reebo qiyaastii shan maalmood oo Imaaradku saxaafada ka wareereen Qadar.
Waa tan labaade sida adag ee ay xiriirka ay u jareen oo ay ku jirto in la eryo dadka reer Qadar ee ku nool dalalka goáanka gaaray. Weliba loo qabtay 14 maalmood oo keliya. Waxay dawladahaasi amreen in laga xiro dawlada Qadar badda iyo beriiga dalalkaas.
Sababtu waa maxay
Sida ay sheegteen dawladahaas waxay ku eedeyeen in dawladda Qadar ay taageerto Argagixisada iyo cadawga wadamada carabta ee Iran.
Yay arintani dan u tahay
Dawladda ugu horeysa ee ka faaiideysa waa Israel oo heshay xulufo carbeed oo ay ka midaysan yihiin dulaanka lagu hayo dhulka Falastiiin iyo burburinta xaq u dirirka reer Falastiin oo uu ururka Xamaas ugu horeeyo.
Xamaas waa urur ka dhisan dhulka yuhuudu boobtay ee Falastiin weliba xoogoodu maamulo Marinka Qaza. Xamaas waxay isku arigti yihiin ururka akhwaanul muslimiin ee ka dhisan Masar. Waana Sababta ugu weyn oo Masar dagaalka ba’an Xamaas ugu hayso. Taasoo gaarsiisay inay la safato oo ugu tagto dawlada yuhuuda.
Dawlada kale ee arintan ay dan u tahay waa dawladda Iran oo Iyana ay fursad dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ugu jiraan in dawaladaha gacanka carbeed kala jabaan. Dawladda Iran ayaa loolan baán kula jirta Sucuudi Carabiya oo doonaya hogaanka Jasiirada carabta. Taa waxaa u dheer in sucuudigu xakameeyo fididda Shiicada Gacanka carbeed oo ay ku jirto kuwa ku nool Degaanada Barriga ee Sucuudiga iyo Xuutiyiinta yemen ka dagaalamaya.
Sababaha dhabta ah ee xiriirka loogu jaray Qadar
Sababha dhabta ah ee loola dagaalay dawlada Qadar waxaa ka mid ah;
inay tahay dawladda keliya ee taageerta xaq u dirirka Xamaas iyo ururka Akhawanul muslimiin ee ay dawladda Masar argagixio ugu yeertay inqilaabkii askart ka dib.
Inay Xiriir wanaagsan la leedahay dawaldaha Iraan iyo Turkiga.
Intaa Waxaa dheer dhacdadii madax furashada ee Qadar ay siisay Shiicada reer Ciraaq oo afduubtay 26 qof oo ay ku jiraan qaar reer boqor ah. Lacagtaa waxaa lagu qiyaasay 1 billion dollar oo 70% ay qaateen ciidamada Iran, 30% kiina ay qaateen qaar ka mida urur diimeedyada xag jirka ah ka dagaalama Ciraaq. Taasoo ay sucuudigu u arkeen inay ahayd lacag taageero ah oo ka badan madax furasho.
Maraykan Wax ma ka ogaa arintan
Madaxweynaha Maraykanka ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray ;
Intii aan ku guda jiray safarkaygii Bariga dhexe, waxaan tibaaxay in aysan sii jiri Karin maalin gelinta araada xagjirnimada. Hogaamiyayaashii waxay farta ku fiiqeen Qadar – eeg. (“During my recent trip to the Middle East I stated that there can no longer be funding of Radical Ideology. Leaders pointed to Qatar – look,”)
Hadalkaa wuxuu Muujinayaa in Dawladda maraykanu ay wax badan ka ogeyd in dawladda Qadar xiriirka loo jaro oo si weyn loogu cagajugleeyo si ay inta kale ula mid noqoto.
Hase yeeshee, Aqalka cad ee maraykanku wuxuu jeediyay hadalo kuwa kor ku xusan ka duwan.
Dawladda Soomaliya Sidey u abaari arintan?
Shaki kuma jiro in arintan ay dawladda curdanka ah ee Soomaliay saamayn weyn ku yeelanayso arintan. Waxaan xusuusanaa in dawladdii hore ee Soomaliya ay Xiriirka u jartay dawladda Iran markii Sucuudigu xiriirka u jaray. Taasoo keentay in hayadihii ku xirnaa dawladda Iran Muddo gaaban loo qabtay inay dalka ka baxaan. Somaliy iyo Iran marna ma diririn.
Sidaa darteed dawladda Soomaliya waxaa la gudboon inay dhex dhexaad ka ahaato arintan oo aysan calaaqaadka marna u jarin Dawladda Qadar. Waayo dawladda Soomaaliya waxay u baahantahay dhamaan saaxiibadeed. Haday diriraana inay kala dhex galaan ayay xaq u leeyihiin. Arintan maaha ugub. Markii Dawladda Masar ay aqoonsatay oo ay xiriirka la yeelatay Dawladda Yuhuuda 1979kii ,heshiiskii Camd David, dhamaan dawladaha carbeed xiriirkii way u jareen Masar marka laga reebo Soomaliya iyo Suudaan.
Soomaliyana lagama daba geyn Masar ee waa lagu ixtiraamay goáankaas.
Inkastoon maanta Soomaaliya yara liidato hadana , waxaa la gudboon inay danta qarankeeda ka hormariso midda saaxiibada isku xanaaqay.
Talaado 6-June 2017